Shiinaha LED-ka Ganacsiga Degdegga ah ee Ka-baxa Iftiinka Isku-dhafka Waxsoosaarka iyo Warshada |Saselux
Nambarka Model: CR-7089
①[ Faahfaahinta Faahfaahin ] Calaamada ka bixida degdega ah ee hogaaminaysa waxay ka samaysan tahay guryaha ABS ee heerkulbeegga ah ee duritaan.Waxa uu leeyahay 120V/277V dual danab hawlgalka.Wax soo saarkuna waa 4W max.Calaamaddan ka bixista iftiinka waxay leedahay laba madax oo la hagaajin karo. Madaxeeda waxaad u rogi kartaa jihada aad rabto.Oo madax kasta oo iftiin ah wuxuu ku dhex dhisan yahay SMD LED oo dhalaalaya, wuxuu iftiimin karaa meel 100 tallaabo u jirta.Waxay ku habboon tahay meel qoyan, laakiin ma qoyan.
②[50000 Hours Lifetime] Bateriga 3.6V Nickel Cadmium ee loo isticmaalo isku-dhafka iftiinka degdega ah wuxuu u baahan yahay 24 saacadood oo kharash buuxa ah.Kharash kasta oo buuxana wuxuu socon karaa 90 daqiiqo hawlgalka degdegga ah.Cimriga calaamadan bixitaanku waa 50000 saacadood.
③[3 Daqiiqo Rakiba] Calaamadan ka bixida iftiinka combo waa halbeega Ameerika oo buuxisa shuruudaha xeerka dhismaha.Waxaad si sahlan ugu gudbi kartaa kormeerka waaxda dab-demiska.Sidoo kale, calaamadan ka bixista hogaanka aad bay u fududahay in la rakibo, kaliya waxay u baahan tahay 3 daqiiqo.Waxa lagu dhejin karaa gidaarka iyo saqafka.Dhammaan qalabyada iyo agabka waa lagu daray.
④ [Dammaanadda Sannadka 5] SASELUX waxay bixisaa 5 sano oo dammaanad ah qaybaha korantada iyo guryeynta nalkan ka baxa degdegga ah, iyo 2 sano oo dammaanad ah batteriga.
⑤[Ku saabsan SASELUX] Iyada oo 5 sano oo dammaanad ah oo loogu talagalay qaybaha korantada iyo guryaha, SASELUX waxay sharaf u tahay inay ku saleysan tahay USA, oo bixisa alaab tayo leh oo heerka koowaad ah qiimo jaban oo ay taageerayaan khabiiro. Waxaan ilaalineynaa heerarka sare ee dhammaan alaabada iyadoo la tijaabinayo si loo hubiyo in waxqabadka ugu fiican iyo deegaanka badbaadada.Waa inaan bixinaa adeegga ugu fiican ee nalka degdega ah ee soo baxa.
Hore: Laba Madax oo la hagaajin karo Isku-dhafka Ka Bixida Degdegga ah
Xiga: Koodhka Cagaaran ee Orodyahanka Iftiinka Iftiinka Combo
Calaamadaha ka baxa ninka ordaya
Dhoofinta Calaamadaha Degdegga ah ee LED